मनोरञ्जन – Nepal24News
एजेन्सी । भारतीय चर्चित ५६ वर्षीय अभिनेता सुनिल सेट्ठीले अहिले फिल्म खेल्न छाडिसकेका छन् । एक जमानामा अक्षय कुमार, अजय देवगन लगायतका स्टार नयाकहरुलाई समेत टक्कर दिने सेट्ठी आजभोलि खासै पर्दामा देखिँदैन। उनले फिल्ममा काम नगरे पनि वार्षिक डेढ अर्ब बढी आम्दानी गर्छन् । सुनिल सेट्ठीले अहिले रोयल इन नामकको आफ्नै होटेल चलाई राखेका छन् । उनको फिल्म प्रोडक्सन हाउस तथा बुटिक पनि सञ्चालनमा छ । यी सबै बिजनेसबाट वार्षिक १ अर्ब ६० करोड आम्दानी गर्दै आएको भारतीय मिडियाहरूले विशेष प्राथमिकताका साथ समाचार छापेका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार आफ्नो करियरमा करिब ११० भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेका उनले ८ वर्ष को लभ अफेयर पछि माना सेट्ठीसङ्ग विवाह गरेका थिए । धड्कन फिल्मको सफलताले गर्दा एउटा फिल्म खेले बापत ८ करोड पारिश्रमिक लिने सुनिल फिल्म भन्दा बढी व्यापारमा समय दिएसँगै उनी चलचित्रकर्मबाट बिस्तारै टाढीँ
नेपाल आईडल-२ मा रीमासंगै यी नायकले गर्देछन् होस्ट
काठमाडौं । नेपाल आइडलको सिजन २ का कार्यक्रम संञ्चालकहरु परिवर्तन भएका छन् । देशकै प्रतष्ठित गायन रियालीति शो “नेपाल आईडल” को दोस्रो संस्करणको पनि तयारी सुरु भईसकेको छ । एपिवान टेलिभिजनले भित्राएको दोस्रो संस्करणका लागि प्रस्तोता फाईनल भएका छन् । “नेपाल आईडल २” को होस्ट यसअघिकी प्रस्तोता रीमा बिश्वकर्मासंगै पछिल्लो समय ‘२ रुपैयाँ’ बाट चर्चामा आएका नायक आशिफ शाहले होस्ट गर्ने भएका हुन् । ‘नेपाल आइडल’ को पहिलो संस्करणका भिजे सुशिल नेपाल अर्को चर्चित रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’मा ब्यस्त रहेकोले आशिफले दोस्रो संस्करणलाई होस्ट गर्ने भएका हुन् । ६ महिनाको लागि अनुबन्धित भएका उनले राम्रै पारिश्रृमिक लिएको पनि चर्चा छ । आशिफ यतिबेला डामाडोल चलचित्रको स्क्रिप्ट लेखन कार्यमा व्यस्त रहेका छन् । “नेपाल आईडल २” को अडिसन भने चैत्र ६ गते भैरहवा ,चैत ११ गते धनगढी, बैशाख ३ गते हेटौँडा, बैशाख ८
राधिका आप्टेको नयाँ खुलासा : यस्तो सम्म हुँदोरहेछ फिल्म उद्योगमा
मुम्बई। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री राधिका आप्टेको जति चर्चा उनको अभिनयनको हुन्छ, त्यति नै चर्चा उनको बोल्ड र बिन्साद जीवन शैलीको हुने गरेको छ। उनी फिल्ममा जहिल्यै फरक किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न मन पराउँछिन्। सँगै उनी कुनै विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन पछि पर्दिनन्।केही दिन अगाडि उनले आफ्नो जीवनसँग जोडिएको एक यस्तो खुलासा गरेकी छन्, जसलाई निकै बोल्ड भएको मानिएको छ। उनले नेहा धुपियाको शो बीएफएफएसमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै आफूले एक पटक दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगका एक चर्चित अभिनेतालाई थप्पड हानेको बताइन्। भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार राधिकाले फिल्म शुटिङको आफ्नो पहिलो दिन भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘तमिल फिल्मको शुटिङ थियो, त्यो फिल्ममा मसँगै साउथका चर्चित अभिनेता पनि थिए। उनले मेरो पैतालमा काउँकुती लगाउन थाले। हामी यसअघि पहिला कहिल्यै पनि भेटेका थिएनौं। उनको हरकत देखेर मैले उनको गालामा थप्पड हान
मुम्बइ। बलिउड स्टार इरफान खानले शुक्रबार आफ्नो रोगको बारेमा प्रस्ट पारेका छन् । जसको उपचारको लागि उनी विदेश जाँदैछन् । बलिउडमा इरफान खानमात्र होइन अन्य कैयौं सुपरस्टारहरु छन् जो मृत्युको मुखबाट फर्किएका हुन् । १. प्रिती जिन्टाः प्रिती २ पटकसम्म मृत्युको नजिकै पुगेर फर्केर आएकी हुन् । पहिलोपटक एक कार्यक्रमको सिलसिलामा श्रीलंकाको कोलम्बो गएकी प्रिती दुर्घटनामा परेकी थिइन् । दोस्रो पटक उनी विदा मनाउन थाइल्याण्ड गएका बेला बम विष्फोटको शिकार भएकी थिइन् । २. हेमा मालिनीः २०१५ मा हेमा मालिनी ठूलो कार दुर्घटनाको शिकार भएकी थिइन् । दुर्घटना यति भयानक थियो कि यसमा उनको आँखा निकै मुस्किलले जोगिएको थियो । उनलाई निकै चोट लागेको थियो । यद्यपि उनले मृत्युलाई जितिन् । ३. सेफ अली खानः फिल्म क्या कहना को सुटिङका बेला सेफको टाउको एउटा ढुंगामा ठोक्किएको थियो । यसका कारण उनको टाउकोमा झण्डै १०० टाँका ल
‘लक्की’ ससुराकी ‘अनलक्की’ बुहारी
पूर्वविश्वसुन्दरी ऐश्वर्य राय बच्चन बलिउडमा त्यति जम्न सकिनन् । जति उनका समकालीन हिरोइनहरू जमे । उनको बलिउडयात्रा त्यति सुखद हुन सकेन ।तर, करिअरको सुरुआती चरणमा उनले दुई ‘ब्लकबस्टर’ फिल्म गुमाइन् । सायद, त्यही कारण भन्ने गरिएको होला मान्छेले अवसरलाई चिन्न सक्नुपर्छ । अवसर चिन्न सकेन भने मान्छे पछाडि पर्छ । निर्देशक धर्मेश दर्शनले उनलाई आमिर खानसँग ‘राजा हिन्दुस्तानी’मा खेलाउन अफर गरेका थिए । तर, उनले अस्वीकार गरिन् । उक्त फिल्मबाट करिश्मा कपुरले सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीतर्फको फिल्मफेयर अवार्ड जितिन् । यो फिल्म ९० को दशकको धेरै आम्दानी गर्ने तेस्रो फिल्म बन्यो । त्यस्तै, यश चोपडाले उनलाई शाहरुख खानसँग ‘मैने तो मोहब्बत कर ली’मा अफर गरेका थिए । तर, उक्त फिल्म पनि उनले इन्कार गरिदिइन् । पछि, उक्त फिल्म ‘दिल तो पागल है’ भएर ब्लकबस्टर भएको थियो । फिल्मले वर्षकै सबैभन्दा बढी आम्दानी गरे
आफ्ना फ्यानहरुको धेरै खुल्दुली पछी अन्तत बलिवुड अभिनेता इरफान खानले आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी दिएका छन
एजेन्सी। बलिउड अभिनेता इरफान खानलाई लागेको रागबारे अनेकौं अड्कल काटिएका बेला इरफान आफैंले वास्तविकता सार्वजनिक गरेका छन् । केही समय पहिले उनले आफूलाई निकै दुर्लभ रोग लागेको भन्दै ट्वीट गरेपछि उनको रोगबारे अनेकौं अड्कल काटिएका थिए । इरफानले ट्वीटरमार्फत आफूलाई न्यूरो इण्डोक्राइन ट्युमर नामको निकै दुर्लभ रोग लागेको बताएका छन् । उनी यसको उपचारको लागि विदेश जान लागेको बताएका छन् । उनले आफ्ना शुभचिन्तकहरुसँग आफ्नो स्वास्थ्यलाभको कामना गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
फिल्म ‘गुलाम’को सुटिङको क्रममा भेटीएकी महिलालाई आमिरले प्रेमका नाममा गर्भवती बनाएको खुलासा, १५ वर्षे ‘नाजायज’ छोरा पनि यसरी लाग्दैछन् आमिरकै बाटोमा एजेन्सी । बलिउड चर्चित नायक तथा समाजसेवी आमिर खान कम विबादमा आउने कलाकार हुन् । बलिउडमा उनलाई मिस्टर परफेक्सनिस्टका उपनामले चिनिए पनि उनको व्यक्तिगत जीवन भने त्यति परफेक्ट थिएन । आमिरको जीवनमा रीना दत्त र दोस्रो किरण राव मात्रै आएको भनाई उनका धेरै दर्शकहरुमाझ चर्चित भए पनि उनको जीवनमा एक अर्की महिला पनि आएकी थिइन् । जससँगको सम्बन्ध आमिरले कहिलै पनि स्वीकार गरेनन् तर उनकै नाममा एक ‘नाजायज’ छोरा भने हुर्कीरहेका छन् । विक्रम भट्टको फिल्म ‘गुलाम’को सुटिङको क्रममा जेसिका हाइन्स नामकीमहिलासँग भेटभएपछि आमिर आफूसँग लिभिङरिलेसनसिपमा समेत रहेको दाबी सहितको समाचार एक चर्चित इन्टरटेन्मेन्ट म्यागजिनले छापेको छ । सोही क्रममा उनी गर्भवती भएको उनले बताइन
विराट र अनुष्का बस्ने घरको भाडा थाहा पाउदा उड्ने छ तपाइको होस
वलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मासँग निकै गुपचुप तरिकाले गरेको विवाहपछि अब विराट कोहली यतिबेला आफ्नो घरलाई लिएर चर्चामा छन्। विराटले इंस्टाग्राम एकाउन्टमा एक फोटो शेयर गरेका छन्। सो फोटोमा उनको घरको झ्यालबाट निकै रमाइलो दृष्य देखिन्छ। उनी बसेको फ्याल सबैले देखेपछि त्यसको मूल्य र भाडाका विषयमा चर्चा हुन थालेको छ। भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार विराटले सो फ्याटको भाडा १५ लाख तिर्दै आएका छन्। जति रुपैयाँमा आम नागरिक आफ्नो शीर लुकाउन घर बनाउन सक्छन्, त्यति मूल्य यी भारतीय क्रिकेटर प्रतिमहिना घर भाडा मात्रै तिर्छन्। फोटोमा देखिएको फ्याल विराटले ३४ करोडमा किनेको घरको भएको अनुमान गरिएको थियो। तर, यो घर विराटको नभएर उनी भाडाको घरमा बसेको पत्ता लागेको संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
माग्ने बुढालाई २५ लाखको फिल्म अफर
काठमाडौँ । चर्चित हास्य कलाकार ‘केदार घिमिरे’ उर्फ माग्ने बुढालाई ‘२५ लाख’ को फिल्म अफर आएको छ । ‘ऐले लात्ताले हानेर बारीको पाटोमा पुर्याई दिन्छु’ कुनै समयको चर्चित भनाइ थियो जुन टेली शृंखला ‘मेरी बास्सैका माग्ने बुढाले बोल्थे । यसै भनाइ र पोख्त उनको अभिनयले आज ‘माग्ने’ संसारभर परिचित नाम हो । माग्नेको नामले चर्चित यी कलाकारले लामो समयसम्म टेली शृंखलामा अभिनय गरे पश्चात केहि बर्ष यता मात्र चलचित्रमा हात राखेका थिए । ‘मेरी बास्सै’ बाट नै अत्याधिक रुचाइएका यी कलाकारलाई चलचित्र क्षेत्रमा ठाउँ बनाउन कुनै गारो कुरा थिएन । नभन्दै चलचित्र ‘छ एकान छ’, ‘वडा नम्बर ६’ ‘छक्क पन्जा १’ छक्क पन्जा २ लगायत का चलचित्रबाट दर्शक को भारि माया पाउन उनि सफल भए । यस संगै उनको नाम, मान र दाम को पनि पद बढ्दै गयो। १० लाख रुपैया लिने गरि चलचित्र ‘रामकहानी’का लागि साइन गरेका माग्ने बुढालाई २५ लाख रुपैया पार
गुमनाम नायिका निरुताले राजेश हमालको विवाहबारे गरिन् यस्तो खुलासा (भिडियो सहित)
एजेन्सी । नेपाली फिल्म क्षेत्रको एक चर्चित अभिनेत्री निरुता सिंह सन् १९९३ मा तुलसी घिमिरेको चलचित्र दक्षिणा मार्फत नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रबेश गरेकी थिईन् । नेपाली सिनेमा उद्योगबाट विगत १ दशक देखि ओझेल परेकी छिन् । निरुता सिंह एस समयमा निकै व्यस्त र सफल नायिका हुन् । लगातार हिट फिल्म दिएकी नायिका निरुता सिंह अहिले गुमनाम जस्तै भएकी छिन् ।लामो समय देखि मुम्बईमा रहेकी निरुता अब भारतीय फिल्म निर्माण गर्ने तरखरमा छिन् । विगत पाँच वर्षदेखि माइग्रेनको उपचार र बलिउड संघर्षको लागि निरुता मुम्बईमा बस्दै आएकी छिन् । निरुताले एक अन्र्तवार्तामा राजेस हामललाई विवाहको शुभकामना दिएकी छिन् । उनले आफ्नो विवाहको वारेमा जोडि सबैको माथिबाट भगवानले बनाउने बताईन् । राजेश हमालले पनि विबाह नगर्ने भनेका थिए तर गरेछन् यसमा धेरै खुसी लागेको र हाँस्दै धोका दिएको जनाइन् ।